के तपाईं घरमै बसीबसी चालक अनुमतिपत्र लिन चाहनुहुन्छ ? अब यसो गर्नुस ! – Life Nepali
के तपाईं घरमै बसीबसी चालक अनुमतिपत्र लिन चाहनुहुन्छ ? अब यसो गर्नुस !
के तपाईँ सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि घण्टौँसम्म लाइन बस्ने समस्याबाट दिक्क हुनुभएको छ, यातायात कार्यालय नै नगई चालक अनुमतिपत्र लिन चाहनुहुन्छ ? यदि त्यस्तो हो र तपाईँ वाग्मती प्रदेशमा बस्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि एउटा राहतको समाचार हुनसक्छ। *** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ***
कोरोनाभाइरस महामारीका बेला मात्रै नभई अरू बेला पनि हुने सेवा प्रवाहलाई सहज एवम् छिटोछरितो बनाउन भन्दै वाग्मती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘ई-टोकन’ सम्बन्धी काम थालिएको जनाएको छ भने ‘होम डेलिभरी’ मार्फत् चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने विकल्पमाथि परामर्श गरिरहेको छ।** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तलकाे लिंकमा क्लिक गर्नुहोला **
Next इजरायल रोजगारीको आवेदन दुई/चार दिनमै खुल्छ : राजदूत डा.शाक्य